Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Haddii Ay Beesha Caalamku Diiday Tayenta Ciidamada Soomaalida,Hadaba Maxaa La Gudboon Dowladda Federaalka Iyo Ciidamadeeda ?‏ Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Haddii Ay Beesha Caalamku Diiday Tayenta Ciidamada Soomaalida,Hadaba Maxaa La Gudboon Dowladda Federaalka Iyo Ciidamadeeda ?‏
Beesha Caalamka ayaa si joogta ah u diideysay Tobankii Sano ee la soo dhaafay baaqyo badan oo ka imaanayey Siyaasiyiinta Soomaalida gaar ahaan Madaxda Dowladda Federaalka,Baaqyadaasi ayaa lagu dalbanayey tayenta qeybaha kala duwan ee ciidamada Soomaalida sida Militiriga,Booliska iyo kuwa Badda laakiin nasiib daro, Waxa ay noqdeen baaqyadaasi kuwa aan dheg jalaq loo siinin arimo badan oo jira dartood.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa la yaaban caga-jiidka haysta Beesha Caalamka ee ku aadan dhismaha ciidamo Soomaali ah oo xoogan oo la wareega amaanka dalka,Waxa ayna dadkani is weydiinayaan waxa Soomaaliya ka duway dalalka Ciraaq iyo Afganistaan, kuwaas oo loo dhisay ciidamo gaarayo Boqolaal Kun halka Soomaaliyana loo la’yahay 20 Kun oo askari.
Waxyaabaha cajiibka ah ee lagu arkay Beesha Caalamku,Waxaa ka mid ah in askari Africa ah oo xasharaadka iyo cayayaanka cuni jiray la siiyo $ 1000 halka askarigii Soomaaliga ee wadanka iska lahaana loo la’yahay $ 200.Waxaa Iyadana wax lala yaabo ah in Maalin kasta lagu baaqo kordhinta tirada ciidamada AMISOM halka ay ahayd in la kordhiyo tirada qeybaha kala duwan ee ciidamada Soomaalida si ay ugu danbeyn ula wareegaan amaanka dalka.
Inkasta oo ay dadaaleen Madaxda Soomaalida sidii ay ugu qancin lahaayeen Beesha Caalamka, in la dhiso ciidamo Soomaali ah oo xoogan hadana waxa aan aaminsanahay in aysan la imaanin Madaxda Soomaalida farsamadii iyo go’aamadii loo baahnaa ee lagula xisaabtami lahaa Dunida, Waayo haddii ay Jiri lahayd Madax karti iyo geesinimo leh, Waxaan hubaa in mar hore la kala bixi lahaa.
Anigu waxa ay ila tahay in Madaxda Soomaalida looga baahan yahay in ay go’aan rasmi ah ka qaataan howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya (amisom) mar haddaan diyaar loo ahayn xoojinta Hay’adaha Dowladda Federaalka iyo tayenta ciidmada Soomaalida Iyadoo loo daneynayo Shacabka Soomaaliyeed ee daalan.
Haddii la doonayo in ay Soomaaliya degto maxaa loo xoojin la’yahay awoodda Dowladda Dhexe,Sidoo kalena looga dhaafi la’yahay faragelinta ay ku hayaan IGAD iyo Dowladaha Dariska sida Itoobiya iyo Kenya oo kale ? Haddii ay Beesha Caalamku dowladimo la rabto Soomaaliya,Maxaa cunaqabateynta hubka loogu hayaa Dowladda ? Dowladda aan hub iibsan Karin oo aan qalabeyn Karin ciidamadeeda ma dowladbaa ?
Ugu danbeyn, Waxa aan leeyahay haddii aysan Beesha Caalamka diyaar u ahayn dhisidda iyo tayenta ciidamo Soomaali ah oo xooggan iyo waliba dhismaha Hay’ado dowladeed oo xoogan, Waa in aysan Umadda Soomaaliyeed gelinin dagaal aan wax faa’iido ah ugu jirin dalka iyo dadka Soomaaliyeed tusaale ahaan muxuu ku dhimanayaa askariga Soomaaliga ah haddaanan la xaqiijineyn dhismaha qaran Soomaaliyeed oo mideysneyn ?
Hadaanan la xoojineynin awoodda Dowladda Dhexe,Maxay tahay waxa aan ka faa’iideyno dagaalka u dhaxeeya reer Gablbeedka iyo Kooxaha Islaamiyiinta ? Haddaanan laga dhabeyneynin balanqaadyada loo sameeyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed,Waa maxay waxa naloo sheegayo ? Yaase diyaar u ah in uu naftiisa ku waayo waxa loo yaqaano Xarbu-Wakaalah ? Mise waxa ay noo qaateen dad wada muqayiliin ah oo aan waxba fahmeynin ?
1-In uu Madaxweynaha is casilo Xafiiskiisana ku wareejiyo Wakiilka Xoghayaha Guud Qaramada Midoobay Mr.Kay
2-In ay kala tagaan ciidamada Soomaalida mar haddaan meesha loo joogin dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo xooggan.
3-In Calanka Soomaaliga laga fujiyo dhamaan dhismayaasha Dowladda lana sura calanka UN-ka iyo kan Midowga Africa.
4-In la isaga dhex baxo AMISOM iyo Kooxaha Islaamiyiinta inta uu Caalamka ka garwaaqsanayo danaha Umadda Soomaaliyeed
5-In aanan la aqbalin in Wiilasha Soomaaliyeed xabbadda la isaga dhigo mar haddaan meesha loo joogin dhismaha dowlad Soomaaliyeed.
6-In lala shaqeeyo oo kaliya Beesha Caalamka marka ay garwaaqsadaan ogolaadaana fulinta dalabyada dadka Soomaaliyeed
Daawo Muuqaal Xiiso Badan Hees Cusub Oo Loo Qaaday Walaalaha Gaza Ee Yahuuda Dhibaatada Ba’ani Ku Heeyso Oo Ku Luqeynayo Fanaanka Caanka Ah Ee Cawaale Adan”Gazaay Waan Ooyayaa Dhibtana Waan Kula Qabaa
War Bixin Muhim Ah Dhul Badeedka Soomaaliya Waa 750 Kilometer